Qalabka jimicsiga ee aad ka iibsan karto xarakaadyada guriga iyadoo karantiinada coronavirus ay sii socoto
Shaxda Soosaarka Flow
Habeynta qolka jimicsiga ee saxda ah micnaheedu waa inaadan u baahnayn inaad iska bixiso lacagta xubinnimada jirdhiska ama tababaraha shaqsiyeed. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa qalabka saxda ah ee jimicsiga.
Qalabyada aad dooratayna way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran heerkaaga jimicsiga iyo yoolalkaaga jimicsiga. Iskuday inaad miisaanka lumiso? Waxaa laga yaabaa inaad doorbido inaad kaloriinta ku gubto qalabka wadnaha sida treadmill ama baaskiil taagan. Marabtaa inaad murqaha kor u qaaddo ama aad dhisto muruq? Qaado taxane dumbbell ah oo aad ku lug yeelato tababar-xoog leh.
Haddii ay dhacdo inaad ubaahantahay dib-u-cusboonaysiinta faa'iidooyinka jimicsiga caadiga ah: Marka loo eego Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, waxay hagaajin kartaa caafimaadka maskaxda, waxay kaa caawin doontaa inaad maamusho miisaankaaga, yareynta halista cudurrada wadnaha, xoojinta lafahaaga iyo murqahaaga, iyo kaa dhig mid aad u farxad badan.
Haddii aad bakhaar ka dhigayso garaashkaaga, qolkaaga jiifka ama qolka jiifkaaga - haa, wax kasta oo shaqeeya! - halkan waa qalabka jimicsiga guriga ee aad u baahan tahay si aad u abuurto shaqo-gurigaaga dilaaga ah ee dilaaga ah.
Waqtiga boostada: Jan-10-2020
Cinwaanka: Wadada No.2 Zhengxian, Paoche Town, Pizhou City, Gobolka Jiangsu, Shiinaha
Telefoonka gacanta: 86- (0) 516-66220516